Sports News – Banglarchok News Portal
နောက်ပိုင်းမှာ ဘောလုံးရဲ့ စီးပွားရေးကွန်ရက်က ကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပြီး ဘောလုံးအသင်းတွေရဲ့ဓနအင်အားက အလွန်အမင်းတန်ခိုးအင်အားကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်တဲ့ ၀င်ငွေတွေ အများအပြားရရှိလာကြတာကိုလည်း တွေ့နေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် Deloitte က လက်ရှိဘောလုံးလောကရဲ့အချမ်းသာဆံုးအသင်း (၁၀) စာရင်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာမှာတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်က (၆) သင်းအထိ ပါဝင်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်အသင်းတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါစို့။ ၁.ရီးရဲမက်ဒရစ် ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးဘောလုံးအသင်းအဖြစ်တော့ လာလီဂါထိပ်သီးကလပ်ရီးရဲမက်ဒရစ်အသင်းက ထိပ်ဆုံးမှာဦးဆောင်နေပါတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ် (၃) နှစ်ဆက် ရယူနိုင်ခဲ့ခြင်းက ရီးရဲအတွက် စီးပွားအရရော တော်တော်လေးအကျိုးရှိစေခဲ့ပါတယ်။ ရီးရဲဟာ စုစုပေါင်း ယူရို ၇၅၀.၉ မီလီယံအထိကြွယ်ဝမှုရှိပါတယ်။ ၂.ဘာစီလိုနာ ရီးရဲရဲ့နောက်မှာတော့ အဓိကပြိုင်ဘက်ဘာစီလိုနာအသင်းက ပိုင်ဆိုင်မှု ယူရို ၆၉၀.၄ သန်းနဲ့ ဒုတိယနေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။Continue Reading
ဘာစီလိုနာ ဟာ ယခု နွေရာသီ အပြောင်းအရွေ့မှာ အသင်းရဲ့ ကစားသမား ၈ ဦးကို ရောင်းချသွားဖို့ ပြင်ဆင် နေတာကြောင့် ပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်တန်း အသင်းကြီးတွေဟာ စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့် နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကတ်တလန် အင်အားကြီး ကလပ်ဟာ ဖရန်ကီ ဒီဂျောင်း နဲ့ အသင်းကို ရောက်လာဖို့ အလားအလာ ရှိနေတဲ့ မက်သီးယပ် ဒီလစ် တို့ကို နေရာ ပေးနိုင်ဖို့ အတွက် အသင်းကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဖို့ စီစဉ် နေပါတယ်။ ဖိလစ်ပီကော်တင်ညို ၊ အိုင်ဗန်ရာကီတစ် နဲ့ ဆယ်မြူရယ်အမ်တီတီ တို့ဟာ ယခုနွေရာသီမှာ ဘာစီလိုနာ အသင်းContinue Reading
ဘယ်ဂျီယံလက်ရွေးစင်တိုက်စစ်ကစားသမားဟာဇက်ဟာ စပိန်လာလီဂါကလပ်ရီးရဲကိုအပြီးသတ်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါပြီ။ ရီးရဲဟာ နေမာကိုခေါ်ယူဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ ဟာဇက်ကိုပဲ ခေါ်ယူခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် ကျွမ်းကျင်သူတွေက ရီးရဲအနေနဲ့ နေမာကိုကျော်ပြီး ဟာဇက်ကိုခေါ်ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ မှန်ကန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ရှင်းပြလာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွမ်းကျင်သူတွေ သုံးသပ်ထားတဲ့ ဟာဇက်ဟာ နေမာထက် ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အသင်းကိုသာ အဓိကဦးစားပေးမှု နေမာနဲ့ ဟာဇက်တို့ကြားက အဓိကခြားနားချက်ကတော့ အသင်းအပေါ်ဦးစားပေးမှုပါ။ ဟာဇက်ဟာ အသင်းဖော်တွေ ယုံကြည်ရတဲ့ ကစားမားတစ်ယောက်ဆိုတာ မမှားပါဘူး။ နေမာဟာ အရည်အသွေးကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကစားသမားဆိုပေမယ့် တချို့ပွဲတွေမှာ သူ့ရဲ့မလိုလားတဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုက အသင်းကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ ဟာဇက်ကတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဟာဇက်ဟာ အထောင်တိုက်စစ်၊ တောင်ပံဘယ်နေရာမှာ ကစားရရ ညဉ်းညူနေတတ်သူမဟုတ်ဘဲ အသင်းအတွက်ပဲContinue Reading
ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှူးနေမာရဲ့အရှုပ်တော်ပုံဇာတ်လမ်းကတော့ တစ်နေ့တစ်ခြား တစ်စထက်တစ်က ကြီးထွားလာလို့နေပါတယ်။ နေမာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလအတွင်းက ဘရာဇီးမေယ်ဒယ်ထရန်ဒက်ဒီကို ပါရီမြို့ကတည်းခိုခန်းတစ်ခုမှာ အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲခံထားရသူပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ (၆) ရက်နေ့က ထရန်ဒက်ဒီဟာ ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုနဲ့ အင်တာဗျူးပြုလုပ်ကာ နေမာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူအနေနဲ့ နေမာကို ဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီး ချစ်တင်းနှောဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းထရန်ဒက်ဒီက ၀န်ခံသွားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် နေမာဟာ သူမကို ရိုက်နှက်မှုတွေပြုလုပ်ပြီး အကာအကွယ်မယူဘဲ အတင်းအဓမ္မကျင့်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ ဘောလုံးပရိသတ်တွေကြားမှာ တစ်စတစ်စ စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာခဲ့ပြီး နေမာအနေနဲ့ အမှန်တကယ်ပြုမှုခဲ့သလား၊ ထရန်ဒက်ဒီအနေနဲ့ လိမ်ညာပြောဆိုနေတာလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားနေကြတာပါ။ ထရန်ဒက်ဒီအနေနဲ့ မေလ (၂၁) ရက်နေ့က ပထမဆုံးဆေးစစ်မှုခံယူခဲ့ပါတယ်။Continue Reading
ယူကရိန်းနဲ့ ဆားဘီးယားအသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ ခြေစစ်ပွဲမှာတော့ အိမ်ရှင်ယူကရိန်းအသင်းက ခြေစွမ်းပြကစားပြီး ၅-၀ ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အပြတ်အသက်အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပွဲစဉ်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံမန်စီးတီးအသင်းကြယ်ပွင့်ဇင်ချန်ကိုဟာ မိနစ် (၉၀) ပြည့်ပါဝင်ကစားခဲ့ပြီးခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုခြေစွမ်းပြပြီး အသင်းလည်းဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့တဲ့အတွက် ဇင်ချန်ကိုတစ်ယောက် ပျော်မဆုံးဖြစ်နေပုံပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဇင်ချန်ကို ပွဲအပြီးပြုလုပ်တဲ့ အင်တာဗျူးမှာတော့ အားလုံးအံ့အားသင့်စေလောက်တဲ့ ထူးဆန်းတဲ့အမူအရာကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဇင်ချန်ကို သတင်းထောက်အမျိုးသမီးရဲ့ပါးကို နမ်းခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းထောက်အမျိုးသမီးဟာ ပွဲစဉ်အကြောင်း ဇင်ချန်ကိုကို မေးမြန်းရာမှာတော့ ဇင်ချန်ကိုဟာ ရုတ်တရက် ဆိုသလို သူမရဲ့ပါးကိုနမ်းခဲ့ပြီး မေးခွန်းကိုဖြေကြားခြင်းမရှိဘဲ ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဇင်ချန်ကိုရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် သတင်းထောက်အမျိုးသမီးဟာ ရှက်သွေးဖြာသွားခဲ့ရပြီး စကားတွေတောင် အယောင်ယောင်အမှားမှားဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်အွန်းလိုင်းပေါ် ပျံ့နှံ့လာခဲ့ရာမှာတော့ ပရိသတ်တွေက သဘောကျခဲ့ပြီးContinue Reading
Ballon d’Or ဆုအတွက် ရေပန်းစားမှုမှာ မက်ဆီကိုကျော်လွန်သွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ဗန်ဒိုက်ခ်ျ
ဗန်ဒိုက်ခ်ျတစ်ယောက် နောက်ဆုံးမှာတော့ Ballon d’Or ဆုကို ရရှိတော့မှာလား။ လီဗာပူးနဲ့ နယ်သာလန်လက်ရွေးစင်နောက်ခံလူဗန်ဒိုက်ခ်ျဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် Ballon d’Or ဆုအလေးပေးမှုကို ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူးမက်ဆီကို ကျော်လွန်နိုင်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဆီဟာ ဒီနှစ်ရာသီမှာ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေကို ပြသထားပြီး မမေ့နိုင်စရာသွင်းဂိုးတွေ၊ ခြေစွမ်းကောင်းတွေကို ပြသထားနိုင်ခဲ့လို့ မက်ဆီပဲ Ballon d’Or ဆုကို ရရှိလိမ့်မယ်လို့ အစောပိုင်းက သုံးသပ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာစီလိုနာအနေနဲ့ လီဗာပူးကိုရှုံးနိမ့်ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ကနေ ထွက်ခွာခဲ့ရပြီးနောက်မှာ Ballon d’Or ဆုနဲ့ပတ်သက်ပြီး မက်ဆီအပေါ် သံသယတွေစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူးအသင်း ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ဗိုလ်စွဲပြီးနောက်မှာတော့ ဗန်ဒိုက်ခ်ျဟာ Ballon d’Or ဆုကို ရအတွက် မက်ဆီကို အကောင်းဆုံးဖိအားပေးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။Continue Reading
တစ်ရာသီအတွင်း (၁၂၁) ဂိုးအထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဘာကာအမျိုးသမီးလူငယ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှူး
ဘာစီလိုနာရဲ့လာမာစီယာအကယ်ဒမီဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးအကယ်ဒမီတစ်ခုအဖြစ် ကျော်ကြားလျက်ရှိနေပါတယ်။ လာမာစီယာ အကယ်ဒမီကနေ ခေတ်အဆက်ဆက် အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဆီ၊ ဇာဗီ၊ အင်နီယေစတာတို့ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် လာမာစီယာရဲ့ပုံရိပ်ကို အထင်းသားတွ့မြင်နိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း လာမာစီယာဟာ ဘောလုံးလောကက လူငယ်တိုင်းရဲ့အိပ်မက်တစ်ခုအဖြစ်ရှိလို့နေပါတယ်။ အခုလည်း လာမာစီယာအကယ်ဒမီက ကစားသမားတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဘာစီလိုနာအမျိုးသမီး ယူ-၁၂ အသင်းရဲ့အံ့အားသင်ဖွယ်စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် ပရိသတ်တွေ ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာ ယူ-၁၂အသင်းဟာ ဒေသတွင်းအမျိုးသားလိဂ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ ၀င်ရောက်ကစားနေတာဖြစ်ပေမယ့် သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကတော့ အံ့အားသင့်စရာကောင်းလွန်းပြီး တကယ့်ကိုလက်ဖျားခါချင်စရာပါပဲ။ ဘာစီလိုနာအမျိုးသမီးယူ-၁၂ အသင်းဟာ ပွဲပေါင်း (၃၀) ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ရာမှာတော့ ပွဲစဉ်တိုင်း အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ဒုတိယနေရာကအသင်းကို (၁၄)သင်းဖြတ်ကာ ဗိုလ်စွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီးအံ့အားသင့်စရာကောင်းတာက ဘာစီလိုနာအမျိုးသမီးယူ-၁၂အသင်းဟာ အဲဒီပွဲပေါင်း (၃၀)မှာ သွင်းဂိုးစုစုပေါင်း ၃၂၉Continue Reading
အသင်းရဲ့ ပေါင်သန်း ၃၀၀ တန် အလုံးစုံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ကစားသမား ၁၁ ဦးကို ဥရောပကလပ်တွေထံ ရောင်းချသွားဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ ရီးရဲယ်မက်ဒရစ် အသင်း
ရီးရဲယ်မက်ဒရစ် အသင်းဟာ သူတို့ အသင်းကို အလုံးစုံ ပြုပြင် ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားရာမှာ အနည်းဆုံး ကစားသမား ၁၀ ဦးကို နွေရာသီ မှာ ရောင်းချသွားဖို့ အတွက် ရည်မှန်းနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း စပိန် အင်အားကြီး ကလပ်ဟာ သူတို့နဲ့ လမ်းခွဲဖို့ ရှိနေတဲ့ ကစားသမားတွေကို ရောင်းထုတ်ဖို့ ကြိုးစား ရမှာ ဈေးကောင်းရဖို့ အတွက် ကိုတော့ ရုန်းကန် နေရပါတယ်။ မက်ဒရစ် ရဲ့ ဥရောပ ပြိုင်ဘက် အသင်းတွေဟာ ဘာနေဗျူး ကို စွန့်ခွာမယ့် ကစားသမား တွေအတွက် လက်ရှိမှာ ချိုသာတဲ့ ဈေးနဲ့ ရဖို့ စောင့်ဆိုင်း နေကြပါတယ်။ LosContinue Reading
အက်သလက်တီကို နဲ့ ချယ်လ်ဆီး အသင်း မှာ ကစားရတဲ့ ကွာခြားချက် ကို ထုတ်ဖော် ပြောဆို လိုက်တဲ့ #မိုရာတာ
စပိန် လက်ရွေးစင် တိုက်စစ်မှူး အယ်လ်ဗာရို မိုရာတာ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ အတွင်း မှာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း နဲ့ အဆင်မပြေမှု တချို့ ရှိနေခဲ့တဲ့ အပြင် ခြေစွမ်းပြဖို့ ရုန်းကန် ခဲ့ရတာကြောင့် ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့ ကာလ မှာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း မှ လာလီဂါ ကလပ် အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် အသင်း သို့ ရာသီဝက် အငှား နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ ကစား ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အက်သလက်တီကို မှာတော့ မိုရာတာ ဟာ ခြေစွမ်း ပြကစား ခဲ့တဲ့ အတွက်Continue Reading
In: Latest News, Sports News
স্টিভ রোডসের জন্য কাজটা বড্ড কঠিন। হাজার হলেও মাতৃভূমি বলে কথা, একটা আলাদা টান তো থাকেই। তবে ইংলিশ এই কোচ পেশাদার বটে। আগেই জানিয়েছেন, আপাদমস্তক ইংলিশ হলেও বাংলাদেশের হয়ে এবার হারাতে চাইবেন ইংল্যান্ডকে। মাশরাফিদের জন্য কাজটা হয়তো কিছুটা সহজ হয়ে যাচ্ছে। ইংলিশ ব্যাটসম্যানদের রোডসের চেয়ে ভালো আর কে-ই বা চিনবেন!Continue Reading
Exchange Items On eBay
In: Animals, Cele, Funny, Latest News, Sports News, Uncategorized
What is eBay? eBay.com is the most prominent site to purchase and sell products on the web. It’s where people and organizations can purchase or sell new or second-hand things, from books and garments to vehicles to nearly anything. Here’s the means by which eBay works: A merchant records aContinue Reading